#IBC2018: Dell EMC Na - enye Mgbanwe N'akụkụ Board - NAB Gosi News site na Mgbasa Mgbasaozi. Onye mgbasa ozi mgbasa ozi nke NAB Show, Onye NAB gosiri LIVE
Home » Apụta » #IBC2018: Dell EMC Na-enye Mgbanwe n'esepụghị Aka na Board
Dell EMC ga-igosipụta na ndò #7.C39 na IBC Gosi 2018 na RAI Amsterdam, na September 13th-18th, 2018. Ha ga-egosiputa ihe kachasị ọhụrụ n'ikike teknụzụ nke nchekwa ngwaahịa nke na-ekpuchi ndị mgbasa ozi dị elu, òtù egwuregwu, na ụlọ ọrụ post-mmepụta. Na mmalite nke ịbawanyewanye n'ezie nke Real Real na-eme ka ọtụtụ ndị ahịa na-emegharị na teknụzụ ndị na-akwọ ụgbọala na-akwado ụdị ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ. Dell EMC emeela onwe ha site n'inyere ndị ahịa, ndị mmekọ, na ngwaahịa aka na mgbasa ozi na ntụrụndụ.
Dell EMC A na-ewu ndị ọrụ maka ịrụ ọrụ dị oké njọ. PowerEdge MX na-ekpuchi ma ọ bụ ọrụ ọdịnala na ọdịnihu. Nke a dị oke arụmọrụ na-enye ohere iji kọwaa ngwanrọ data, nke a na-akwadoghị na etiti ụgbọelu, na-akwado nkwado maka ọtụtụ ọgbara ọhụrụ nke teknụzụ na-arụ ọrụ-teknụzụ nhazi, ụdị nchekwa ọhụrụ na ọhụụ ọhụrụ njikọta-nke ọma n'ime ọdịnihu. Inye nkwado na-ejikọta ọnụ ọgụgụ dị iche iche, nchekwa nke ngwanrọ, netwọk akọwapụtara software, ọgụgụ isi na nnukwu ọrụ data. Na-akwado ngwa nVMe ntanetị kachasị dị ala na ntanaka 25GbE connectivity, ngwaahịa a "creams" arụmọrụ.
"Ọ bụ ezie na teknụzụ na-emepụta, dị ka ọgụgụ isi, IoT na nchekwa software na-akparịta ụka na ịkparịta ụka n'Ịntanet, na-enye uru ndị bara uru, ọrụ ha nwere ike isi ike ịkọ ma mee ka ọ bụrụ ihe ịma aka ọhụrụ maka ngalaba IT," kwuru, sị Ashley Gorakhpurwalla, onyeisi oche na onye isi nchịkwa, Dell EMC Ngwá Ọrụ na Akụrụngwa. "PowerEdge MX na-eme ka ụzọ dị mfe ịmepụta ma jikọta ọnụ ọgụgụ, nchekwa na ịkparịta ụka n'Ịntanet, ya mere òtù nwere ike ịgbanwe IT ha n'ụzọ na-eme ka ego dịkwuo mma ma nye nchebe ego maka ọgbọ n'ọdịnihu nke nkà na ụzụ ọganihu."
PowerEdge MX na-enye mgbanwe maka nhazi ma na-enye nnukwu mkpokọta nke components dịka:
Dell EMC Chassis PowerEdge MX7000 - Na-enye ntọala ngwanrọ nke ọma na nkwado maka ọtụtụ ọgbọ usoro ihe nkesa, na usoro ihe ngwugwu na njedebe ndụ ndụ na njedebe maka otu ihe niile, na-enyere ndị otu aka ilekwasị anya n'ihe banyere azụmahịa ha karịa nhazi IT. Nke a 7U chassis gụnyere ọkwa asatọ iji nweta ọtụtụ dị iche iche na ọnụọgụ abụọ na njikọta nchekwa.
Dell EMC PowerEdge MX740c na MX840c na-atụnye sleds - Oghere abụọ na nke anọ nwere ihu ọma na-eweta ihe zuru ezu, enweghị nkwekọrịta na-arụkọ ọrụ, na arụmọrụ zuru oke na nchịkọta nhọrọ nchekwa dị iche iche gụnyere NVMe draịva. MX740c na otu obosara ya na MX840c ga-akwado zuru ezu Intel® Xeon Scalable Processor family na ruo elekere isii nke ebe nchekwa. MX740c bụ ụlọ ọrụ ahụ naanị otu-obosara, oghere abụọ, ihe nkesa modular nwere ike ụlọ na ọkwa ruo isii 2.5 "NVMe, SAS ma ọ bụ SATA draịva. MX840c nwere ike ijide ma rụọ ọrụ asatọ.
Dell EMC A na-echekwa PowerEdge MX5016s nchekwa - Ogidi, obosara zuru ezu, ihe nchekwa nchekwa na-arụkọ ọrụ saịlị MX, na-ejide ngwa ngwa diski diski ike na 16, nke kachasị asaa MX5016s na-arụ na ụgbọala MX maka ihe ntanetị 112 nke nchekwa nchekwa. . Enwere ike ịmepụta ihe ndị a n'otu n'otu ma ọ bụ karịa ọtụtụ sava, na-enye ihe dị mma nchekwa dị mkpa maka ọnọdụ ndị a kapịrị ọnụ.
Dell EMC PowerEdge MX Ethernet na Fiber Channel na-agbanwe bọọdụ - Ọdịda ala ọhụrụ a, nnukwu bandwidth switching modules for multi-chassis surrounding includes process automation for compliance topology, àgwà nke ọrụ na nkwado kwadoro maka arụmọrụ netwọk na interface PowerEdge MX interface. PowerEdge MX bụ ụlọ ọrụ mbụ nke ụlọ ọrụ ahụ iji wepụta Ethernet 25Gpbs njedebe (GbE) na 32Gbps Fiber Channel host connectivity. N'ikwekọ na 100GbE na 32G Fiber Channel uplinks, ndị ahịa nwere ike ịtụ anya na 55% Mbelata na-agbanwegharị ụkọ nke ukwuu-scalable, multi-chassis fabric architeures.
The Dell EMC IkeEdge MX ga-adị n'ụwa niile na-amalite na September 11th, 2018, ma ga-abụ ihe ngosi ngwaahịa na #IBC2018 mgbakọ. Echefula ohere iji gosipụta ike dị egwu na Dell EMC ezinụlọ nwere ike inye ọrụ gị. Booth #7.C39 na IBC Gosi 2018 na RAI Amsterdam.
Banyere Dell EMC
Dell EMC, akụkụ nke Dell Teknụzụ, na-eme ka òtù dị iche iche dị iche iche, mezie ma gbanwee ọnọdụ data ha site na iji ụlọ ọrụ na-eduga n'inweta ihe nnweta, sava, nchekwa na nchekwa data. Nke a na-enye ntọala a tụkwasịrị obi maka ụlọ ọrụ iji gbanwee IT, site n'ichepụta ígwé ojii, ma gbanwee azụmahịa ha site na iji ihe igwe ojii na-eme ihe na nnukwu ngwọta data. Dell EMC ndị ahịa na-agafe na mba 180 - gụnyere 99 pasent nke Fortune 500 - ya na ụlọ ọrụ dị iche iche nke zuru oke na nke ọhụrụ na-agbanwe agbanwe site na ọnụ ruo n'ígwé ojii.
Ụgha & Akụrụ virtual eziokwu	2018-09-07
Previous: Igwe ihe ngosi nke grøn Festival nke kwadoro site na Blackmagic Design Liveflowflow
Osote: Quantum Brings StorNext Archive Solutions to Avid MediaCentral Environments
Hey Buddy!, Achọtara m ozi a maka gị: "#IBC2018: Dell EMC na-enye Mgbanwe n'adịghị na Board". Nke a bụ njikọ weebụsaịtị: https://www.broadcastbeat.com/ibc2018-dell-emc-offers-flexibility-across-the-board/. Daalụ.